Dugsiga islaamiga ah ee Al-Azhar oo lugu eedeyey inuu kala sooco gabdhaha iyo wiilasha | Somaliska
Dugsi islaami ah oo lugu magacaabo Al- Azhar, oo ku yaala magaaladda magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Iswiidhan, ayaa lugu eedeyey in uu kala sooco gabdhaha iyo wiilasha. Arrintan ayaa keentay markii telefeyshinka kanaal 4-ta Iswiidhan gaar ahaan barnaamijkiisa Kala Fakta uu soo saaray barnaamij dabagal ah oo ku sameeyey.
Muuqaal fiidiyoow ah oo telefeeyshinku baahiyey ayaa laga arkay sida bas iskuulku leeyahay ay gabdhaha iyo wiilasha u kala sooceen, iyagoo gabdhaha fariiyey xagga dambe halka wiilashana qeybta hore.
Carruurahan raaca baska iskuulka oo da’doodu u dhaxeeyso lix jir ilaa tobban jir, ayuu taleefeyshinku sheegay ineeysan aheyn markii ugu horeeysay oo sidaas loo kala sooco.Waxaa talefeeyshinku sheegay in marar hore u dhacday.
“Aniga iyo maamulaha dugsiga kolkii aan daawanay muuqaalka laga soo duubay, waxaan isla garanay mid aan aan aqbaleeyno uusan aheyn ama aanu raali ka nahay” ayuu yiri Roger Lindquist oo ka jawaabayey muuqaalkaasi uu daawaday.
Dhinaca kale ra’iisal wasaaraha dalka, Stefan Löfven oo ka hadlayey araftidiisa ku aadan talaabada lugu kala soocay ardeyda dhigata iskuulka Al-Azhar ku tilmaamay mid aad u fool xun. Maamulka dugsiga Al-Azhar-na waxaa ay sheegeen in dugsigoodu ku dhisan yahay dimoqraadiyad ee uunnu aheyn mid Islaami ah. Waxaa sidoo kale ay sheegeen in shaqaalaha ka howlgala ay 80% (Siddeetan boqolkiiba) yihiin dad aan aaminsaneyn diinta Islaamka, taasina ay cadeeyn u tahay beey yiraahdeen sida aan dugsiga loogu tilmaami karin mid islaamiyah.
Ugu dambeyntiina Roger waxaa uu sheegay in mas’uuliyada qaladkaas dhacay ay qaadanayaan balse aannu iskuulka ka warqabin kala qeybinta gabdhaha iyo wiilasha kolka ay raacayaan baska iskuulku leeyahay.